Isgaarsiinta waa walaac weyn maalmahan. Waxaa jira tiro ka mid ah qalabka soo bandhigay si loo caawiyo isgaarsiinta oo degdeg ah iyo LG waa mid ka mid ah Been ugu weyn. Waxaa si fiican u qalabaysan iyo mid ka mid ah qalabka ugu horumarsan iyo casriyeeyey oo dhan sifaatka aad u sareeya iyo technology. Haddii aad iibsaday cusub, malana Samsung Galaxy S5, tusaale kale oo Android phone, wareejinta xog muhiim ah lagama maarmaan noqoto.
Xitaa haddii xogta wareejinta ka Samsung in LG si fudud loo samayn karaa, sababtoo ah waxay leeyihiin dhufto ee mobile ku habboon, dadka intooda badan ay wajahdo dhibaato, maxaa yeelay, iyagu ma oga waxa software si ay u isticmaalaan, oo ay ku tiirsan yihiin Bluetooth, ama xadhig. Iyadoo qaar ka mid ah dadka kale ayaa si guul leh loo wareejiyay xogta waxaa jira kuwa la kulmeen tayo liita ama laga waayi karo xogta inta ay socoto. Haddii aad rabto in aad si buuxda u gudbiyaan xogta aan ka kaaftoomi, waa in aad ogtahay software saxda ah si ay u isticmaalaan. Hadda su'aashu waxay kaliya waa, sidee ayaad xogta laga Android wareejiyo Android xaaladaha soo sheegnay ka yar?
Xalka ugu wanaagsan: Guji si ay u gudbiyaan xogta laga Samsung Si LG
Habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan xogta ku saabsan dhammaan xiriirada android aan ka kaaftoomi noqon doonaa iyada oo Wondershare MobileTrans. Waa aalad yaabka leh oo u fududayn kartaa xanuun oo dhan. Inta u dhaxaysa telefoonada Android, waxaa effortlessly wareejin karaan xiriirada aad la leedahay hal click iyo aad telefoonada Android oo shidan ee kombiyuutarka. Tan iyo waa 100% ammaan ah oo si sahlan loo isticmaali, tayada waa isku mid sida mid ka mid ah asalka ah. MobileTrans Horumarsan ma aha oo kaliya inta u dhaxaysa telefoonada Android, laakiin sidoo kale shirkadaha kale iyo qalabka, oo ay ku jiraan Samsung, HTC, Sony, Apple, ZTE, Huawei, Nokia, Google, Motorola, iyo LG.
• haajiraan xog ku saabsan telefoonada ee shirkado kala duwan - Kumanaan ka mid ah qalabka ku saleysan macruufka, Android, iyo Symbian waxaa taageera software this. Iyada oo aan wax dadaal ah, software tani waa awood in aad nuqulka iyo sawirada, xiriirada, farriimo music, videos, iyo SMS text oo dhan wareejiyo. Waxa kale oo ay hijroota xog ku saabsan telefoonada ee sidayaal fara badan, data nuqulada la phone heshiis ah ma-heshiis hal, nuqulo xiriir buuxa, oo ay ku jiraan horyaal shaqo, cinwaanada emailka, info shirkadda, iwm • Soo Celinta ka hayaan - Hadda waxaad ku hayn kartaa gurmad fayl in aad telefoon cusub oo ka Lugood, Blackberry, iyo Kies. Marka aad files gurmad, ma jirto baahi ah in la walwalo macluumaadka shakhsiyeed ama khasaaraha xogta tan iyo markii barnaamijkaan waa 100% ammaan ah. • Xogta kaabta Phone - Haddii aad rabto in aad qaar ku badbaadiyo xog muhiim ah, waa suurtowdaa iyaga gurmad si Mac OS X ama Windows PC. • xogta Transfer ka side isla - Marka laga Android phone (Samsung iyo HTC), telefoonka Symbian (Motorola iyo Nokia), ama macruufka telefoonka (iPhone 4s, iyo iPhone 5), kaliya la Wondershare MobileTrans aad eegista iyo si toos ah wareejin karaan macluumaadka u dhexeeya kasta oo 2 iyaga oo aan laga badinin xogta aad.
Isticmaalka Wondershare MobileTrans in xogta laga Samsung wareejiyo LG
Iyada oo taageero ah MobileTrans ah, transfering dhammaan faylasha muhiim ah, oo ay ku jiraan video, xiriirada, fariimaha SMS, abuse wac, sawiro, muusig iyo playlists dhexeeya telefoonada, noqday fudud oo degdeg badan. Xitaa in aad wareejin kartaa shakhsi jadwalka si fudud!
Tallaabada # 1: Ku rakib Arjiga iyo Connect LG iyo Samsung Phone in Computer
Wax kale Ka hor, download MobileTrans software on your computer, ka dibna oo ku xidh. Marka samayn, uu u bilaabi si ay u helaan suuqa kala hoose.
Kala iibsiga telefoonka ayaa, soo kabashada xogta, hawlaha tirtiro xogta iyo gurmad xogta waa la isku dhafan ee software this. Si aad u dooratid ka Phone in Transfer Phone hab, sida iska cad guji "Phone in Transfer Phone" ee uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada # 2: Dooro Phone in ay Phone Transfer Mode
Ka dib markii ay soo degsado software-ka, waxa aad ka arki doonaa laba qaybood oo waaweyn ee qalabka. Waxaad la isku xira doonaa labada qalabka. Iyada oo fiilooyinka USB, xirmaan qalabka Samsung oo LG si aad u computer. In yar ilbiriqsi, qalabka muujin doonaa faahfaahinta iyo image ee casriga ah, iyo qaybta kale ah, dhiggiisa. Hadda, go'aamiyo il iyo ujeedadoodu qalabka iyada oo button Flip. Marka xiran, aad suuqa kala ekaan karaa:
Fiiro gaar ah: The sumadaha aaladaha aad lagu soo bandhigi doonaa "Source" iyo "Destination" sida. The Source waa Samsung, halka caga dhigan yahay telefoonka LG. Laakiin haddii aad jeceshahay inaad bedesho meelaha laba qalab aad, aad riix laga yaabaa in "Flip," taas oo button buluug ah. Marka ay ku xiran yihiin, loo hubiyo in ay ogaan your computer.
Tallaabada # 3: ka Samsung wareejinta xogta si LG
Sida aad arki karto, ma jiro xog ah oo ku saabsan ilaha telefoonka. Xogtan ku qoran dhexe, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, iyo iwm, ayaa loo gudbin karaa. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si ay u xusaan xogta ka qalab Samsung jir ah inuu u dhaqaaqo qalab cusub LG. Marka calaamadeeyay, riix "Start Copy" button, ka dibna "Waxaa buuxiya" button marka la dhammeeyo guji.
Tixgelinta: Iyada oo ku xidhan ilaa xadka ama miisaan ah xijiyaan aad soo telefoonka cusub, kala iibsiga qaadan kartaa waqti ka mid ah. Waxay qaadan doontaa dhowr daqiiqo dhammayn marka aad ka Samsung wareejiyo fariimaha qoraalka ah in ka badan 12,000 in ay LG, laakiin kumanaan sawiro, kala iibsiga qaadan lahaa dheer - laba saacadood.
Tani Wondershare MobileTrans barnaamij la cadeeyay ku ool ah, sababtoo ah sida software waxaa si nidaamsan tijaabiyey marar badan. Si ka duwan habka soo jireenka ah ee suuqa kala iibsiga, waxa ay taasi adiga ku wareejiyo habka baadi-caddayn. In dhawr miridh, waxaad gebi nuqul ka kartaa xogta oo dhan ka hore Samsung in aad LG phone cusub. Iyadoo qasabno kaliya ka fog dhowr, innaba shuqul wasakh lug. Tani dhab ahaan waa hufan badan iyo waqti badan oo aad ka badbaadiyay.
> Resource > Android > Sida loo kala iibsiga xogta ka Samsung in LG